I-Marriott's BeachPlace Towers - Fort Lauderdale, FL - I-Airbnb
I-Marriott's BeachPlace Towers - Fort Lauderdale, FL
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Sabrina
Ubhukha ngokuqondile nomnikazi we-Marriott. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami ukuze uthole ukutholakala kwamanye amadethi okungena.
I-1 Bedroom Villa e-Marriott's BeachPlace Towers enhloko-dolobha ye-yacht yaseFlorida i-Fort Lauderdale, lapho imizila yamanzi e-turquoise ikumema ukuthi uhlole. Ibekwe enhliziyweni yeGold Coast yaseNingizimu Florida, indawo yethu yokuhlehla isendaweni ekahle eduze nenqwaba yezindawo zokudlela, ukuzijabulisa nezinketho zokuthenga, kanye namamayela angu-23 wamabhishi anokuthula.
Imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka e-Cruise Ports (cishe amamayela angu-5).
Ngeke ngisebenzise amayunithi ami eshare lesikhathi. Umnikelo Okhethekile! Marriott's Beach Place Towers, Fort Lauderdale, Florida, USA. Jabulela i-Fort Lauderdale evela ezindlini zokuvakasha ezinempilo, ezitholakala phakathi kwamabhishi olwandle i-Atlantic Ocean kanye ne-Intracoastal Waterway e-Marriott's BeachPlace Towers. Indawo yokugcina yolwandle, le kilabhu yeholide esesitayeleni yamukela izivakashi zase-Fort Lauderdale ezinezindlu ezivulekile zokulala eyodwa noma amagumbi ezivakashi atholakala ngaphezu kwezitezi ezintathu zezitolo nezindawo zokudlela. Qedela ngokufinyelela ku-inthanethi kwe-Wi-Fi okunesizotha, Amakamelo ethu ezivakashi kanye namaVillas obhishi e-Marriott's BeachPlace Towers alungele iholide lakho elilandelayo lase-Fort Lauderdale: Igumbi lezivakashi, 403 sqft., lilala 4: 1 King + Sofabed nekhishi. Ukubuyekezwa okungaphezulu kuka-850 ku-Tripadvisor.
Indawo yethu yokuhlehla isendaweni ekahle eduze nenqwaba yezindawo zokudlela, ukuzijabulisa nezinketho zokuthenga, kanye namamayela angu-23 wamabhishi anokuthula. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, ungathola amagugu acebile ale ndawo ngokuvakashela amakhaya ayo amakhulu omlando namaqoqo emnyuziyamu. Ngokuthile okusha ngokuphelele, zama ukubuka indawo ngetekisi yamanzi. Igumbi lakho lezivakashi elibanzi elinokubukwa okumangalisayo kwe-balcony, ulwandle noma i-intracoastal, liyindawo efanelekile yokuhlehla futhi ujabulele iholide lakho elihle lolwandle.
*Wonke amagumbi ase-BeachPlace Towers anombono wangaphakathi wezindleko noma ukubuka kwamanzi olwandle. Nakuba bengase bangakwazi ukuqinisekisa indawo ethile, noma babuke benza konke okusemandleni abo ukuze bahloniphe izintandokazi zakho lapho betholakala.